Top 50 Online Radio Stations atụ aro ka ị
Ọ bụ ezie na ahụ redio aghọwo bụzi ihe mgbe ochie, e nwere ọtụtụ online redio ụgbọ dị ka ihe abụọ nhọrọ. N'eziokwu, ọnọdụ ọhụrụ a amama-ọma-natara n'etiti poeple niile gburugburu ụwa. Ka afọ ju gị mkpa, ebe a anyị depụta n'elu 50 online redio saịtị na inyere gị aka na-ege ntị ozi ọma, music, okwu na-egosi online.
Yahoo! Music redio bụ a sub akụkụ nke Yahoo.com.It na-eje ozi dị ka ndị ọzọ internet redio service.It ka doro anya ọwa communication.This ngwa na mbụ mepụtara Todd Beaupre na Jeff Boulter.They malitere ọrụ a na November 11, 1999.That yahoo ịzụta a ụlọ ọrụ.
Deezer bụ a egwu music ọrụ na-anapụta na-akpali akpali na multi-Obodo music ahụmahụ karịa nde 26 music Fans worldwide.The oké akụkọ nke Deezer ihe nile elu akụkọ nke ihe online music ụlọ ọrụ na nwa ya nchoputa Daniel Marhely na ọ chọrọ reinvent otú ndị mmadụ ịnweta ha music. A dị oke egwu music redio na-kere Daniel Marhely c ke 2006.
Grooveshark bụ a enyemaka nke Ụzọ Mgbapụ Media Group na bụ ihe online music redio gụgharia ọrụ dabeere na United States. Ọ nwere onwe search engine, nkwanye ọrụ, na nkwanye application.That bụ ya mere Ọrụ nwere ike enuba na bulite music na ike ga-egwuri ozugbo ma ọ bụ atụkwasịkwara a playlist
Last.fm niile bụ ụdị music nkwanye service.It bụ egwu. Ị nwere ike iji Last.fm site edebanye na nbudata na The Scrobbler, nke na-enyere gị aka ịnụ ihe music dabeere na songs ị play.Scrobbler na-eziga na Last.fm ka anyị mara ihe song na ị na-akpọ.
5. digitally dị
Digitally dị bụ a multi-ọwa online internet redio ọrụ na-elekwasị anya nanị na Electronic Music na heavey metal music. Anyị otu nke curators ifucha site petabytes nke ọhụrụ releases na azụ catalogs na-ahụ nanị kasị mma n'ebe onye ọ bụla genre ma ọ bụ ịke. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe nile ka na.
Live365, a online redio nke na-enye 260+ Genres nke music na 5000+ mgbasaozi n'ikuku na music tastemakers.The emepụta nke a redio bụ Metheny, Johnny ego nkịtị, na Carlos Santana.They nile nwere ụdị ngwaọrụ dị ka iPhone ma ọ bụ ama .
E nwere nanị otu free n'ụlọ nke internet redio na nke ahụ bụ Shoutcast.It na-tọrọ ntọala na 100 na ugbu a ọrụ dị ka ndị kasị ibu directories nke professionally na ha nwere aka a mma na nkà otu na-operate.Many media Player dị ka Winam, iTunes, WMP wdg bụ uwe na nke a redio.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ndị freshest ngosipụta nke ọkacha mmasị gị pọdkastị ma na-egosi na internet redio Stitcher Radio nwere ike ịbụ zuru okè ngwọta maka you.They streamed na gị na iPad ma ọ bụ Smartphones .Nke dịghị mkpa nbudata anything.It bụ dị ka ikwunye na Play n'ezie jikọọ ma na-anụ.
Rhapsody si eduga gụgharia music enye ad-free ọrụ na ndị òtù ha na-enye ohere karịa nde 32 iche iche nke songs.They're òtù na-ege ntị na n'ụlọ, ha na ekwentị, na ụgbọala, na-arụ ọrụ ma ọ bụ ha na-Rhapsody ebe ha na-aga . A na ụlọ ọrụ nwere onwe ọkachamara ìgwè ndị editọ ike ụtọ music ahụmahụ na nke a bụ irè n'ihi na ha mụbara na-ege ntị.
Ha imelite posts ebe a mgbe nile na music ozi ọma, saịtị mgbanwe, na ọhụrụ atụmatụ. E nwere ọtụtụ edemede na e na nso nso emelitere dị ka Chakwasa ihie, Gospel wdg
Ihe karịrị 200 kenyere ụgbọ dị na Slackers.You nwere ike bulie a genre ojii na fanye aha artist & music On.They imelite ha nchekwa data kwa ụbọchị na Olileanya ha a otu nke na-enyere on nọgide na-eje ozi 24 awa ụbọchị na 365 ụbọchị na a year.They nọrọ n'ụlọ ọhụrụ artists nke bụ ahụkebe.
AccuRadio bụ a Radio Internet redio nke e mere iji gosipụta nwere nke na-akpali akpali ụzọ ọhụrụ nke Internet redio! Buru ọ bụla ọwa na pịa "" Play "" button - music ga-amalite na-akpọ nnọọ ka AM / FM redio, ma e wezụga na AccuRadio ị nwere ike igwu ọzọ songs, tie iwu megide artists / songs gị adịghị amasị gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
RP bụ a pụrụ iche ngwakọta nke ọtụtụ ekwekọghị na Genres nke music ma na-akasị nlezianya họrọ na agwakọta abụọ ezigbo mmadụ. Ị ga-anụ n'oge a na kpochapụwo nkume, ụwa music, ọbụna a bit nke oge gboo na Jazz. Ihe ị na-anụ na-adịghị random kọmputa na-eme na listi ọkpụkpọ ma ọ bụ na-agwụ musicians.This redio na-tọrọ ntọala site na Bill & Rebecca Goldsmit.
SomaFM ugbu a ohuru online na ha na-egwu a dị nnọọ mma ọrụ na Online Radio world.They broadcasted si a nkwakọba na San Fransisco .Onye aha e nchoputa na-nyụrụ Hodge.He kpebiri iji tọghata a gụgharia redio na-ewetara na Internet ụwa na ọ ịga nke ọma.
RauteMusik (Short aha RM ma ọ bụ #Musik) bụ online internet redio nke dabeere Germany. RauteMusik mbụ na-amalite ha agbasa ozi n'ikuku na 20 April 2003 na nanị otu isi stream.After 4 afọ nke ike na-arụ ọrụ ha bụ ugbu a nnukwu na kasị mmasị redio nke mba Europe.
AH.FM bụ a ma ama online redio na-arụ ọhụụ na-enwe Ọganihu mixes emepụta nanị maka AH.FM site Top djs si gburugburu world.Firstly ulo oru na June 2006 dị ka a oru ngo site Dan na AH ebiliwo ghọọ kasị akwanyere ùgwù Electronic Dance Music redio na Internet. Ọ na-kwadoro site na n'elu 220 bi djs, na-akwado site na a Ụsụụ nke omiiko music hụrụ na Mgbe awa obodo.
Ndị mmadụ na-ege ntị music ka ha na ọnọdụ na ha chọrọ musics adabara ha mode, na Ntụle steeti ha nọ ma ọ bụ kama ịgbanwe ya. A onyeōzi interface e mere site Musicovery izute mkpa a, na "" ọnọdụ na mpe mpe akwa "": ọ na-egosiputa abụọ ahiri anyụike - ọchịchịrị / energetic / nti na jụụ / etc.According ka mode o nwere ike na-akụ ya. N'oge ọ bụla onye ọrụ nwere ike kpọọ ya ka ha chọrọ mode na ọnọdụ.
RadioIO, Inc. na-enye ihe online internet redio media n'elu ikpo okwu nke na-anapụta streamed music n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla na internet ejikọrọ ngwaọrụ. RadioIO si ụlọ ọrụ nwere zuru-ọrụ n'okirikiri na izi ozi ilekota akwado nnukwu franchise ulo oru .Mme vetikal ahịa dị otú ahụ aswellness, ile ọbịa, ahụ ike na mkpọsa.
Eyepartner bụ a ahụkebe ụlọ ọrụ na-eme ka ma mejuputa nkwanye media ngwọta haziri maka n'ikuku nke bụ ọrụaka ma ọ bụ na-emeputa na ọhụrụ entrepreneur. Eyepartner ngwọta na-Enyi na Enyi jikwaa na-eji .Ha anapụta ha na-ejere na dị iche iche CMS na ọ bụ nnọọ aka.
20. Ugboro abụọ J
Mgbe na-ege music online, na gị na TV, ma ọ bụ na dijitalụ redio, Nke a redio bụ ugboro abụọ J. Anyị na-ewetara gị a ukwu na dị iche iche mix nke kasị mma ọhụrụ music si Australia na mba ndị ọzọ, gbakwunyere songs na nka na Mmaji j ka championed n'elu anọ gara aga ọtụtụ iri afọ.
VirtualDJ redio bụ a ndụ online redio nke a na-gbasara gburugburu world.This redio iji a software aha ya bụ Virtual Dj .Ọ initialized na 2005 na i nwere ike ịnụ hiphop, dancehall, na reggaeton.In 2010 ha kwukwara ihe ọwa na a na redio.
The Libre.fm obodo bụ ngwakọta nke dị iche iche ụdị music superfans na nka, ebe nile nka nwere ike ịkọrọ ha music maka onye ọ bụla na-enwe n'ebe ụtọ. I nwekwara ike ige ntị a nhọrọ nke Libre.fm obodo kasị ewu ewu na tracks na anyị na Community redio Station na ọ bụ mere si random nhọrọ nke na usoro egwu niile na Libre.fm ọrụ kwuru na ha hụrụ ha n'anya n'ezie ya ókè.
Nke a bụ a french redio, nke bụ maka gị dị ukwuu na-ege ntị ahụmahụ.
Ọ bụ ụwa nke music nke iso nke otu narị otu narị nke n'elu play listi ọkpụkpọ & ọmarịcha nde 26 tracks. Ha ozi bụ seamlessly anapụta gị ihe kasị mma music ha nye ọrụ ahụ na bụla ngwaọrụ. E motto bụ Mfe dị ka na.
E nwere ndị gara aga mgbe Rik na m nọ na-ede jikotara aka wee mgbe anyị fọrọ nke nta nwụrụ na-achị ọchị. Ndị ahụ bụ ndị kasị gbasaghị nzuzu ụbọchị m mgbe nwere na ọlaedo ụbọchị kwa, na m na-eche ihe ùgwù ka na-akọrọ ha na ya. Ma ugbu a ọ na-nwụrụ n'ezie na a mberede ụgbọala. Ọ nwụrụ enweghị m. Ya mere achọ naanị ọdịmma onwe bastard.
A award emeri amụrụ nke University nke Sheffield ohuru a forge Radio si Media Hub na Sheffield Mmụta 'Union 24 / 7.This e guzobere na 1995 na ha agabiga 120 izu na Media Hub na agbasa ozi n'ikuku na ugbu a ha bụ ndị dị naanị na Internet na niile smart ngwaọrụ.
Otu ugboro ọzọ Groovera na-eto eto again.After Ogologo oge Groovera na-ege ntị niile maara na Jet City Ezumike (mbụ FrostByte uzo Ezumike, OverXposure.com) nke bụ ndị nne na nna nke ihe nile na ọwa na Groovera atụmatụ today.Hopefully Jet City Ezumike bụ ka Groovera si flagship ọwa redio na bụ anyị kasị ochie na ọtụtụ na-ewu ewu karịrị oge na listi ọkpụkpọ nọgidere na-eto eto ọhụrụ ọwa iputa.
28. The Station
MAQAM bụ a US-dabeere music mmepụta ụlọ ọrụ pụrụ iche Arabic na Middle Eastern media akpan songs. A na ụlọ ọrụ e guzobere otu ìgwè nta nke Arabic music, omenala ndị hụrụ, mgbe e mesịrị ọ iche dị ka a nkewa nke 3b, NW Media Inc. "MAQAM" bụ ihe Arabic okwu nke pụtara a ọnọdụ nke elu ùgwù. N'ihi ya, ọ na-ezo aka a egwú na ndị mara mma mode na Arabic music na dabeere na nkeji iri na ise na-ụda ọnụ ọgụgụ
Ọ bụ oké redio saịtị maka music na i nwere ike ịhụ ọtụtụ nke ọkacha mmasị gị artists 'songs ebe a.
30. Taa Hot Country
Taa Hot Country bụ mba music ụlọ ọrụ nke bụ ndị na-abụghị azụmahịa .Various kpochapụwo mba music na internet redio dabeere na Ukwu Rapids na a akụkụ nke Michigan. Taa Hot Country malitere Broadcasting na June 2010 n'okpuru ọ bụ gara aga Ọkpụkpọ na ha na-enye ọhụrụ ọdịnaya ka-ege ha ntị kwa ụbọchị.
31. The Akporo (redio)
Ryerson University ọhụrụ campus na obodo ka iso nke a oké online redio na ọ bụ aha ya bụ The Scope.This agụnye a dịgasị iche iche nke mmemme si University na obodo na mfe na nnukwu omume na ngwugwu nke NCRA omume interchange.They nye 6 awa mbụ ọdịnaya kwa ụbọchị.
Nke a na redio na saịtị, aha ya bụ mgbe Dandelion Records, bụ labeelu Peel we site 1969-1973.We achọ ma ọ bụrụ Anyị nwere ike ịgwa gị na anyị na-Ịnọ nkịtị gwụrụ na-akpaghị aka na formatted redio, na-atụsi anya ike ụbọchị mgbe djs mere ya ka ọ ha wee tinyere, dị ka anyị na-eme. Hopely anyị ga-emeri nsogbu nile.
Hitz redio bụ aha nke defunct internet redio station.It e guzobere site Ryan Dunlop ke 2006 na Ayrshire, Scotland.This redio bụ ugbu a a akụkụ nke Hitz Media Group Ltd. Dunlop bụ nnọọ ihe ịga nke ọma na nke a redio dị ka o nwere ihe karịrị 80000 na-ege ntị na 2003. Tranding ụkpụrụ ichoputa ha na-ekwu na questions.And ha ẹkemụm a ma ama ojii.
The Internet redio obodo nke University nke Glasgow nwere bụ a onwe ha na-abụghị uru Radio station.It emee-atụ ike a pụrụ iche radio.Their ọdịnaya na-emepụta site 200 onwe artist.They dịghị eso listi ọkpụkpọ n'ikpeazụ na-elekọta e onwe mmepụta .Nke ojii lekwasịrị pụrụ iche ọdịnaya na nke ahụ bụ free ọrụ.
35. New Nkịtị Music
New Nkịtị Music bụ ihe online music redio nke a na-chụpụrụ site na-ege ntị 24/7. A ukwuu kenkwukorita redio programms ndị kasị mma ọhụrụ Indie music dabere na ụtọ abụ olu ụtọ na song nkà ịrụ. Mmalite akụkụ nke Tom Leykis si New Nkịtị Network e kere site Tom tinyere na onye ọzọ aha ya bụ Art Webb ha ulo oru redio na 2010, 1st July.
Nke a na saịtị awade ala nke iji na a music pụrụ ịdabere na nnyefe usoro. The WXB na Internet malitere ya ndụ na nanị webcast arụmọrụ na Live365 na a njuaka na-ege ntị. -Emekarị ka anyị ga-emeghe na dị nnọọ banyere 3 na-ege ntị na nkezi banyere iri na abụọ na-ege ntị.
Penwith Radio-amalite na a ụgbọala njem. Chris Goninan na a Obodo kansulo na-arụsi ọrụ ike maka obodo, bụ na ụgbọ ala gburugburu Penwith na mpaghara na-Nick na Okenye Care na Nkwado officer.Nick gwara Chris banyere ya na-eche na nke dị nnọọ otú dịpụrụ adịpụ na owu na-ama ọtụtụ ndị nọ n'ógbè otú ha na-enwe. Nke ahụ bụ otú Penwith Radio mụrụ 2005
Radio Regent bụ a ma ama brọdband redio nke bụ n'ihu ọha inweta Regent Park si ezinụlọ dị ka ihe olu iyi na a raara mechiri emechi circuit ewu ewu telivishọn (Rogers USB ụlọ ọrụ ahịa naanị). Redio brọdband ojii malitere Broadcasting on January 1, 2012 na na-guzobere na Regent Park
Nke a Station e hiwere na 1993, KUBE Radio ma ọ bụ ya sara mbara aha ya bụ Keele University Broadcasting Enterprise, na-enye ya ya zuru aha) ahụ amụbawo site na a kọbọd dabeere mgbasa osisi ka ihe mba ghọtara na-ege ntị si Internet redio. The mbụ KUBE studio bụ a X-amụrụ ewepụghị, na ojii agbasa ozi n'ikuku na 107.9FM nke a na-ejedebeghị na a ụfọdụ ebe na on 10 nanị ọrụ ikikere n'etiti 1998 na 2004. Ọ bụ ezie na Malite An intranet ozi niile na kampos ụmụ akwụkwọ e Malitere March 2003 , na September 2004 KUBE kwagara zuru Internet Broadcasting.
LifeJive Radio bụ a online redio obodo nke dị iche iche na redio ụgbọ akpọsa ezie na ụwa n'obosara maka 365 ụbọchị ndị a Stations mbio oge gboo oké nkume European jụọla oyi na juu music. Ugbu a, ha nwere 7 ụgbọ akpọsa, ego ha na website na-akụ na.
Mutiny Radio bụ a na-abụghị uru, mkpokọta-ọsọ obodo redio nke emi odude ke storefront na Mission District nke San Francisco. Ha nọrọ n'ụlọ na ohuru ndụ egwú egwú, ntochi, uri, nkiri na ajụjụ ọnụ na nka, activists na-eche echiche na-ebi ndụ, na-arụ ọrụ n'out oge ma ọ bụ-abịa site Bay Area ha kwesịrị ka e nụrụ.
Radio23.org bụ a free redio, na-enye Ohere maka mgbasaozi n'ikuku. Nke a redio explores niile music na omenala.
43 Ochie rewaindi
Nke a bụ nnọọ ihe ịga nke ọma redio na-enye nile di iche iche nke ozi ị ga-amasị.
WLIR bụ a ma ama internet redio na ọ na-ekere ọhụrụ music, oge a nkume nke mbụ e nụrụ na WLIR.The mbụ mmụọ nke WLIR a na-echekwa na music mix ma hazie .Ma atụ anyị nwere ike ikwu Larry na Duck, Malibu Sue, na Denis McNamara .Ha ịrụ n'ebe redio ruo ọtụtụ afọ.
GridStream Productions e guzobere May nke 2002 site LAN Tarryk Kozar na na ole na ole enyi n'ime mebere ụwa nke ogba aghara Online (AO), ihe MMORPG eduzi Funcom. Mgbe Mgbe oge na-ha bụ ndị otu n'ime ndị mbụ MMORPG redio ụgbọ na internet ụwa na aka ịsụ ụzọ echiche nke Broadcasting redio si n'ime a mebere world.This GridStream Productions (GSP) na kweere na-kasị ochie Radio MMORPG redio ka akpọsa .
46 Nigerian Webradio
A online Radio aha ya bụ Nigerian Webradio mbụ e guzobere na 2006 na ebumnuche nke Broadcasting Nigeria music, ozi ọma na n'ụlọ-mere ntụrụndụ ọtụtụ nde Nigerians ndụ ná mpụga nke mba Africa Nigeria. All Nigerians n'ụwa nile nwere mpako mmetụta nke n'ụlọ pụọ n'ụlọ ebe-adị kwa ụbọchị ha nwere ike ịbụ n'elu nke ụwa.
47. mmekọrita Radio
Onye na-adịghị n'anya Radio na anyị hụrụ ochie ịke Paireti Radio ụda 60s, 70s na 80s. Mmekọrita Radio enweta nke a. Na ekwu okwu ha n'anya music na nwere ọmarịcha aka mgbe ị na-ahọrọ ha play lists.We ike na-enye mgbanwe na "terrestrial" ụgbọ nwere ike nweta!
Nanị ebe on Internet maka kasị mma nke Independent music na India gburugburu elekere na ụwa dum. Ị nwere ike Buru ụdị ọ bụla nke music na ị ga-achọ ige ntị ya biko-na na na-enwe. Ị nwere ike idebe anyị a akara na music na radioverve ntụpọ com ma ọ bụ ịhapụ a ikwu na igbe na anyị ga-jikọọ ị asap.
Radioseven dabeere na a nzukọ na ọ bụ na-abụghị uru. Ọ mepụtara ọ bụ ọrụ maka afọ dị ka ọ na-amalite site obere web dabeere omume ntụrụndụ ojii na ugbu a ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu otu onye n'ime Sweden. The mmadụ na-agafe n'ebe ahụ oge na obi ụtọ .Maximum ọrụ na-nso nke 15 35 afọ.
50. The abakwa mba
Cameron Avery e guzobere dị ka a mmachi na mgbe somedays ha gbalaga ama agbajikwa elu. Nke a nwere ihe abụọ drummers aha ya bụ Brian Lucey .Ọ bụ nchoputa nke a Radio Station.They izute agatin na nke a na redio na-eme ka a mba tour na 2012 na 2013.The na-ege ntị na-emekarị na-eji na-ege ntị nanị ha song.
3 Ụzọ na-ege ntị Radio Online
Top 25 Free Internet Radio Sites ka iyi Music tụsaara
Mepụta, Share na Download Spotify Playlist
Olee otú Download Anime Online na Free
Olee otú Download Web Videos
Olee otú Download Vimeo Video
Olee otú Hapụ Download Michael Jackson Music
> Resource> Download> Top 50 Online Radio Stations-atụ aro